जानकारी पाइराख्नुस -सुत्ने तरिकाले बताउँछ उसको व्यवहार « News24 : Premium News Channel
जानकारी पाइराख्नुस -सुत्ने तरिकाले बताउँछ उसको व्यवहार
मानिसको सुत्ने तरिका अलग-अलग हुन्छ । धेरै यस्ता मानिस हुन्छन्, जसलाई निश्चित तरिकाले सुत्दामात्रै राम्रो निद् आउँछ । सुत्ने यही तरिकालाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने व्यक्तिको स्वभाव पनि जान्न सकिन्छ ।
मानिसको बानी र व्यवहारको प्रभाव स्वभावमा पनि मेल खान्छ । जस्तो स्वभाव हुन्छ, त्यस्तै व्यवहार र आदत हुन्छ । ज्योतिषशास्त्रमा व्यक्तिको बानी र शारिरीक लक्षणलाई हेरेर स्वभाव थाहा पाउने विद्यालई सामुद्रिक शास्त्र भनिन्छ । आज हामीले यहाँ मानिसको सुत्ने तरिकाअनुसार स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौं ।
१ . दुबैहात र खुट्टा फैलाएर उत्तानो परेर सुत्ने मानिसहरु आफ्नो काम स्वतन्त्रताका साथ गर्न मन पराउँछन् । उनीहरुलाई कसैको हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । यस्ता व्यक्तिमा सबै सुख(सुविधा प्राप्त गर्ने मोह हुन्छ । खासगरी यिनीहरुको जीवनमा कैयन उपलब्धि हासिल हुन्छ । यस्ता मानिसहरु सुन्दरतामा छिट्टै आकर्षित हुन्छन् । यिनीहरुलाई ठट्टा रमाईलो गर्न पनि खुबै मन पर्छ ।
२. घोप्टे परेर सुत्ने मानिसहरु कहिले कहीँ निकै संकुचित बन्छन् । यिनीहरु थोरै स्वार्थी पनि हुन्छन् । यिनीहरुले तबमात्रै साथीलाई सम्झिन्छन्, जब यिनीहरुलाई सहयोगको खाँचो हुन्छ । यदि यिनीहरुले यो सुत्ने तरिका बदल्न सके भने निकै शुभफल प्राप्त हुन्छ ।
३. आफूलाई ओड्नेले पूरै ढाकेर सुत्नेहरु भीड तथा भेलाहरुमा निकै शक्तिशाली र फ्रेण्ड्ली देखिन्छन् । तर, वास्तविकतामा भने यिनीहरु लज्जालु र कमजोर पनि हुनसक्छन् । यिनीहरु कैयन राज आफ्नो मनमा दवाएर राख्न सक्छन् ।
जीवनमा आईपर्ने समस्या र बाधाहरु आफैँ सुल्झाउने प्रयास गर्छन् । आफ्नो समस्यामा अरुलाई दुस्ख दिन र अरुको सहयोग लिन मन पराउँदैनन् । यसहिसाबले निकै स्वाभलम्बी हुन्छन् । यिनीहरुले निद्रामा तरह(तरहको अनुहार बनाउँछन् ।
४. जो मानिस कोल्टे परेर खुट्टा हल्का घुमाएर सुत्छ, ऊ र उनी आत्म विश्वासले भरिपूर्ण हुन्छ । यिनीहरुले कुनै पनि कामलाई पूरा विश्वासका साथ गर्छन् र सफलता पनि हात पार्छन् । यिनीहरु आफ्नो उत्साह र प्रयासमा कहिल्यै कमि आउन दिँदैनन् ।
यसैकारण जुन काममा हात हाल्छन्, त्यसमा सफलता हात लाग्छ । यिनीहरु आफ्नो कामको बलमा नै सबै सुख(सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
५ .जो मानिस उत्तानु परेर दुई खुट्टालाई एकआपसमा क्रस गरेर सुत्छन्, यस्ता व्यक्तिहरु कुनै पनि कामलाई पागलपनको हदसम्म गर्न रुचाउँछन् । कुनै काम सुरु गर्यो भने त्यसलाई पूरा नगर्दासम्म यिनीहरु चैनले बस्न सक्दैनन् । समस्यालाई आफ्नो एकाग्रता र कडा मिहेनतले सुल्झाउने यिनीहरुको स्वभाव हुन्छ । यिनीहरु थोरै एकान्त प्रेमी पनि हुन्छन् । प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्ने शक्ति पनि यिनीहरुमा मजवुद् हुन्छ ।
६. जो मानिस कोल्टे परेर खुट्टालाई पूरै खुम्च्याएर सुत्छ, ऊ स्वार्थी स्वभावको हुन सक्छ । यिनीहरु आफ्नो स्वार्थका लागि नै मित्रता गाँस्छन् । रासलिला र रामरौसमा बढी सामेल हुन्छन् । यिनीहरुलाई शुद्ध र सात्विक जीवन खासै मन पर्दैन । यिनीहरु मसलेदार खाना बढी रुचाउँछन् । यिनीहरु कहिले कहीँ साना कुरामा पनि क्रोधित हुन्छन् ।
७. जो मानिस उत्तानु परेर दुबै खुट्टालाई सिधा र दुई हातलाई सिरान हालेर सुत्छन्, यिनीहरु निकै बुद्धिमान हुन्छन् । यिनीहरु कुनै पनि नयाँ कुरा सिक्नका लागि हमेशा तयार रहन्छन् । कहिले(कहिले यिनीहरुले यस्तो कामसमेत गरिदिन्छन्, जुन अरुलाई निकै कठिन लाग्छ । यिनीहरु आफ्नो परिवारप्रति निकै नै जिम्मेवार हुन्छन् । परिवारको सुखका लागि सदैव प्रयत्न गर्छन् । सबैसँग प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्छन्, यस्तो व्यवहारले कहिले कहीँ यिनीहरुलाई धोखा पनि मिल्न सक्छ ।